निकट भविष्यमै नेपालमा उथलपुथल ल्याउँछौँ : नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ सँगको अन्तर्वार्ता | Ratopati
personनरेश ज्ञवाली exploreकाठमाडौं access_timeकात्तिक १२, २०७४ chat_bubble_outline1
‘यो राज्यलाई हामी मान्दैनौँ, त्यसैले यसविरुद्ध लड्छौँ’
हाल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ जनयुद्धका दिनहरूमा प्रचण्डको निकै प्रशंसा गर्नेमध्येका एक हुन् । तर उनै विप्लव आज प्रचण्डका खरो आलोचक भएका छन् । जनयुद्ध सुरु गर्ने दिनहरूमा गरिएको अठोटलाई प्रचण्डले बीच बाटोमै छोडेको भन्दै त्यो ‘अधुरो क्रान्ति’लाई आफूले पूर्णता दिने बताएका उनी अर्धभूमिगत शैलीमा पार्टी गतिविधि अगाडि बढाइरहेका छन् । राज्यको प्रमुख सुरक्षा निकायले उनको पार्टीलाई मुख्य सुरक्षा चुनौती भन्दै उनका पार्टीका विभिन्न गतिविधिमा रोक लगाइरहेको सन्दर्भमा उनको पार्टीले के गरिरहेको छ त भन्ने कुरा रातोपाटीको डिस्क्लोजर मार्फत जान्न चाहेका छन् युग पाठकले । पाठकसँगै रहेका नरेश ज्ञवालीले पाठकहरू माझ विप्लवको अन्तरवार्तालाई सम्पादनसहित प्रस्तुत गरेका छन् ।
मानिसहरूमा तपाईंले साँच्चै क्रान्ति गर्न खोजेको हो कि होइन भन्ने चासो छ ?
क्रान्ति हाम्रो चाहनाभन्दा पनि आजको नेपालको वस्तुगत अवस्था हो । यो कुरालाई सबै समाजशास्त्री, विश्लेषक, राजनीतिक नेता तथा कार्यकर्ताले स्वीकार गरेको कुरा हो । त्यो आवश्यकतालाई नेतृत्व गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो पार्टीको दृष्टिकोण हो ।
तर, दोस्रो जनआन्दोलनपछि एकथरीको भनाइ के छ भने अब राजनीतिक क्रान्तिको समय सकियो र आर्थिक क्रान्तिको समय आरम्भ भयो ?
यो आफ्नो आदर्श, विचार र मान्यताबाट स्खलित हुँदै विचलित भएका नेताहरूको तर्क मात्र हो । त्यो तर्कलाई नेपाली समाजले, समाजशास्त्रीले, राजनीतिक विश्लेषकले तथा राजनीतिमा समर्पित नेता, कार्यकर्ताले पनि स्वीकार गर्दैनन् । वास्तविकता त्यो होइन । त्यो विषयलाई विषयान्तर गर्ने कुरा मात्र हो । विचलन, विसर्जन र आफ्नो असफलतालाई ढाकछोप गर्न अगाडि सारिएकोे तर्क मात्र हो ।
तपाईंको विचारमा क्रान्तिको आवश्यकता र त्यो निर्माण हुने ठाउँ आज कहाँ छ त ?
क्रान्तिको घनत्व र त्यसको आवश्यकतालाई मापन गर्ने भनेको सामाजिक, राजनीतिक र राज्यको संरचनामा हो । राज्यसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण अङ्गहरू हेर्नुभयो भने परिवर्तन नै भएन भन्ने त होइन । केही परिवर्तन अवश्य भयो तर त्यो पूर्ण भएन । न त सामाजिक रूपान्तरणले, न त सबै उत्पीडित वर्ग समुदायले गुणत्मक ढङ्गले परिवर्तनको महसुस गर्न पाए । समाज र राज्यको संरचना हेर्नुभयो भने स्पष्ट के देखिन्छ भने ६०–७० वर्ष पहिलेको संरचनामा अहिले पनि गुणात्मक परिवर्तन भएकै छैन । यो सबैले मानेको कुरा हो । त्यसपछि कानुन, अर्थतन्त्र अथवा सुरक्षा प्रणाली हेर्नुभयो भने पनि कतै कुनै परिवर्तन भएको छैन । यसले के देखाउँछ भने यो असफल आन्दोलन हो र यसले पूर्णता खोजेको छ । त्यही अपूर्णतालाई पूर्णता दिन क्रान्ति आवश्यक छ ।
जनयुद्ध र दोस्रो जनआन्दोलनमा जहाँ तपाईंहरू पनि हुनुहुन्थ्यो त्यसको बलमा नयाँ संविधानमा समावेशिता, समानुपातिकताको सुनिश्चितता गरियो, यहीँबाट देश सङ्घीयतामा पनि गयो । भन्नुको अर्थ राज्यका प्रणालीमा नयाँपन ल्याउने प्रक्रिया त सुरु भयो नि ?
अघि मैले भने नि, एक तहसम्म त अयो । तर क्रान्तिको दृष्टिकोणबाट यो परिवर्तन अन्तिम क्रान्ति होइन । सुधार पक्कै हो । सुधारत स्वतः पनि हुन्छ । तर जनयुद्धको नेतृत्व गरेको पार्टी र आन्दोलनका हिसाबले यो त्यसको पूर्णताको क्रान्ति होइन । क्रान्तिको अपूर्णताले गर्दा राज्यको अङ्गमा आंशिक परिवर्तन त भए, तर त्यसले आमूल परिवर्तन पाएन । जसले गर्दा नेपाली समाज फेरि पछाडि फर्केको छ र एउटाखाले अन्तरविरोध, अराजकता, असन्तुष्टिमा रुमल्लिएको छ । जनयुद्धको प्रस्तानविन्दु, प्रवेश र विकासको चरणसँग यसको सम्बन्ध छैन ।
के कुरा साँचो हो भने प्रचण्डप्रति मेरो मोह थियो । जनयुद्धका दिनहरूमा भावनात्मक र विचारधारात्मक कोणबाट प्रचण्ड बन्न नचाहने को मान्छे थियो र ? प्रचण्ड भन्ने मान्छेको छविलाई तपाईंले एकैछिन किनारामा राख्नुभयो भने त्यो नाम भनेको आन्दोलन र सङ्घर्षको उत्कर्ष हो । तर आज प्रचण्ड बन्ने मोह छैन ।
शान्ति प्रक्रियामा प्रवेश गरेर अगाडि बढ्दै गर्दा यो कुरा तपाईंहरूलाई थहा थिएन ?
हामीलाई थाहा थियो । थाहा भएरै लेखेर, छलफल, बहस गरेर यो–यो समस्या आउँछ र त्यसलाई यसरी हल गर्ने भनेर टुङ्गो लगाएर हामी आएका हौँ । त्यसबेलाको चुनुवाङ बैठक भन्ने सायद तपाईंहरूलाई थाहा छ । प्रचण्डजीले पेश गरेको दस्तावेज अझै पनि हामीसँग छ । हामीले त्यति नै बेला यसका सकारात्मक–नकारात्मक कुराको विश्लेषण गरेर अगाडि बढेका हौँ । हामीले त्यहाँ गणतन्त्रसम्म काङ्ग्रेस–एमालेसँग जाने र जनयुद्धको समापन चाहिँ राज्यसत्तालाई परिवर्तन गर्ने ठाउँमा पुगेर मात्र हुन्छ भनेर स्पष्ट थियौँ । त्यसपछि मात्र नेपालमा स्थिरखालको राज्य निर्माण हुन्छ भनेका थियौँ । त्यो वर्ग, विचार र संरचनाको दृष्टिकोणबाट नौलो जनवाद हुँदै वैज्ञानिक समाजवादसम्म पुगेर मात्र पुँजीवाद र संसदीय व्यवस्था अन्त्य हुन्छ भन्ने हामीलाई राम्रोसँग थाहा थियो । ०४७ देखि ०५२ सालसम्मको हाम्रो बहसले जन्माएको सार तत्व भनेकै नयाँ जनवाद हुँदै वैज्ञानिक समाजवाद हो । तर प्रचण्डजी, बाबुरामजी फर्किनुभयो ।
प्रचण्ड, बाबुरामले यो कुरा नबुझेर यहाँ आइपुग्नु भएको हो त ? तपाईंको भनाइमा त उहाँहरूमा ठूलो विचलन देखियो होइन ?
विचलन हो भन्नेमा उहाँहरू आफै सहमत हुनुहुन्छ । प्रचण्डले धेरै पटक जोकमा, ठट्टामा, मान्छे हसाउँन भन्नु हुन्छ कि साँच्चै आफैलाई महसुस भएर भन्नु हुन्छ खोई तर भन्न चाहिँ भनिरहनु हुन्छ कि म बिग्रेकै हो । म फर्केकै हो । अब सुध्रिन्छु । तर यो भन्दाभन्दै उहाँले दुई–चार दर्जन पटक भनिसक्नु भयो । बाबुरामजी त अब जनयुद्धकै समीक्षा गर्नुपर्छ भनेर डाँडै काटेर हिँडिसक्नुभयो ।
एक जना नेताको हातमा सबै शक्ति केन्द्रित गरेपछि त्यो नेताले चाहेको दिन सिङ्गै पार्टीलाई विचलनमा लैजान सक्ने रहेछ होइन त ? यो बारेमा किन पहिलै विचार गरिएन ?
नेतृत्वलाई शक्ति चाहिन्छ तर नेतृत्व इमानदार हुनुपर्छ । नेतृत्व त्यसै बन्दैन त्यसको क्षमताले बन्छ र नेतृत्व त्यसै विचलित हुँदैन, त्यसको कमजोरीले हुन्छ । राम्रो भइरहँदा त्यो विश्वकै एउटा अधिकार प्राप्त नेतृत्वमा दरिन्छ । कमजोरीहरू हावी हुँदा उसले आफ्नो इतिहास अन्त्य गर्छ । विश्वमा यस्ता दृष्टान्तहरू छन् । अहिले उहाँहरूको हकमा पनि त्यही हो । त्यसैले प्रचण्डजीलाई बढी अधिकार दियौँ कि भन्ने मलाई लाग्दैन । क्रान्तिको नेतृत्व गर्ने नेतृत्वलाई त्यति विश्वास गर्नैपर्छ । त्यो विश्वास प्रचण्डजीलाई नभएर पार्टी, आन्दोलनलाई गरेको विश्वास हो । त्यसको दुरूपयोग गर्नुभएन । भष्मासुर हुनु भएन । बरदान लिनुसम्म लिने, बरदान पाएपछि आफ्नै थाप्लोमा हात राख्ने । यो नकारात्मक कुरा हो ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सबै अधिकार तपाईंमा केन्द्रित गर्ने गरी अगाडि बढ्दा भोलि तपाईंमा विचलन आउँदैन भन्ने के ग्यारेन्टी छ ?
यसको ग्यारेन्टीका लागि मैले तीनवटा कुरा भनेको छु । पहिलो, यो मेरो मात्र कुरा होइन । यसलाई नेपाली क्रान्तिकारी आन्दोलनको केन्द्रीकरणको रूपमा बुझौँ । त्यो अहिले सानो, ठूलो होला, आफ्नो ठाउँमा छ । यसमा क्रान्तिकारी समुदाय, कमरेडहरू, कमिटी छ जहाँ म पनि छु । भनेपछि यो सबै निकायबाट ‘चेक’ गर्नुपर्छ । दोस्रो, यसमा हामीले छलफल बहस गरेका थियौँ तर यो समस्या हामीले सोचेको भन्दा तीव्रतामा आयो । मैले पहिलो पटक ०६५ को बालाजु बैठकमा यो कुरा उठाएको थिएँ । त्यसबेला मैले कार्यशैलीमा कुरा उठाएको थिएँ । मानिसहरूले उचाल्ने पछार्ने, घिसार्ने गर्छन् तर पनि हामी त्यहाँ जानु हुँदैन र सचेततापूर्वक पाइला चाल्नुपर्छ भन्ने हाम्रो कुरा थियो ।
तेस्रो, कार्यदिशा हुँदै विचारमा बहस गरेर हामी अल्गियौँ । जे–जे कुराले विचलन देखापर्छ, हामीले त्यो छिचोलेर आएका छौँ । म दाबीका साथ भन्छु, हामी त्यता जान चाहेनौँ । त्यो सुविधा पनि उपलब्ध थियो । तर हामीलाई के लाग्यो भने हाम्रो त्यो अवसर र स्वतन्त्रता जनताको विरुद्धमा छ । यत्ति अवसरका निम्ति नेपाली जनतालई हामीले धेरै ठूलो बलिदानको बाटोमा हिँडाउनु हुँदैन्थ्यो । त्यो गलत कुरा हो । चौथो, भौतिक कुराले पनि विचलन आउन सक्छ । त्यसका लागि पार्टी, कमिटी, नेता, कार्यकर्ता दक्ष हुनुपर्छ । अध्ययन गर्नुपर्छ । उनीहरू सङ्गठनात्मक ढङ्गले मात्र होइन कि वैचारिक ढङ्गले नै तयार हुनुपर्छ । त्यस्तो भयो भने विचलनलाई थेग्न सकिन्छ ।
हामीले सीधा र स्पष्ट शब्दमा राज्यसँग लड्ने हो भनेका छौँ । यो कुरा हामीले बाहिरै भनेका छौँ र यो कुरा म यहाँ पनि भन्छु । यो राज्यलाई हामी मान्दैनौँ । यो जनविरोधी, प्रगतिविरोधी पुँजीवादी राज्य हो । पुँजीवादी पनि कस्तो भने दलाल पुँजीवादी राज्य । दिमागमा कमिसन खाने र भोगविलास गर्नेबाहेक केही छैन । त्यसैले हामी यसको विरुद्ध लड्छौँ । लड्दा घटनाक्रम कसरी जान्छ, त्यो राज्यसँग सम्बन्धित कुरा हो ।
तपाईंलाई दुईवटा आरोप छ । पहिलो, प्रचण्ड बन्न खोज्यो । दोस्रो, फेरि ०५२ सालकै जनयुद्ध दोहर्याउन थाल्यो, जुन अब कसरी सम्भव हुन सक्ला ?
निकै महत्वपूर्ण कुरा उठाउनु भयो । के कुरा साँचो हो भने प्रचण्डप्रति मेरो मोह थियो । जनयुद्धका दिनहरूमा भावनात्मक र विचारधारात्मक कोणबाट प्रचण्ड बन्न नचाहने को मान्छे थियो र ? प्रचण्ड भन्ने मान्छेको छविलाई तपार्इंले एकैछिन हटाउनुभयो भने त्यो नाम भनेको आन्दोलन र सङ्घर्षको उत्कर्ष हो । माओलाई हामी आफैले देखेको होइन । सँगै बसेर फोटो खिचेको पनि होइन । तर माओको योगदानबाट लाखौँ–करोडौँ मानिसहरू प्रेरित भए । कयौँ यस्ता गुमनाम माओहरू पनि जो माओ बन्न चाहँदा चाहँदै इतिहासको पानामा पटोक्षेप भए । माक्र्स, लेनिनलाई हामी आफैले भेटेको होइन । भन्नुको अर्थ एउटा आदर्शले कुनै न कुनै रूपले छोएको हुन्छ । तर आज प्रचण्ड बन्ने मोह छैन ।
हामी एउटा क्रान्तिको नेतृत्व गर्न चाहने पात्रचाहिँ अवश्य हौँ । तपाईंले दोस्रो जे कुरा सोध्नुभयो त्यसमा हामीले के भनेका छौँ भने ०५२ सालदेखि ०६२ सम्मको जनयुद्ध उत्कर्ष, विजयतिर गैरहेको नेपाली आन्दोलनकै इतिहासको सबैभन्दा उत्कृष्ठ सर्वोच्च आन्दोलन हो । त्यसलाई कसैले ढाकछोप गर्न सक्दैनन् । त्यो माओ र पेरुको पछिको ठूलो थियो । तर प्रचण्डजीहरू फर्किनुभयो । फर्किनुको कारण जनयुद्धको दबाब पनि हो । जनयुद्धमा आएका चुनौतीहरूलाई उहाँहरूले उचाइमा उठेर निष्कर्षतर्फ लान सक्नुभएन । उहाँहरूले जनयुद्धको राजनीतिक र सैन्य रणनीतिको ठीक समायोजन गर्न नसक्दा फर्किनुपर्यो । त्यसमा पनि दुई कारण छन् । पहिलो, उहाँहरूभित्रको आत्मिक विचलन । उहाँहरू तामझाम, सुविधा, चमकदमकबाट प्रभावित हुनुभयो र त्यसलाई छिचोल्न सक्नुभएन । दोस्रो, वस्तुगत ढङ्गले विश्वमा देखा परेको जटिलता र आएको परिवर्तनमा सिद्धान्त र रणनीति विकास गर्न नसक्नु ।
यसमा हामीले के भनेका छौँ भने अब माओको दीर्घकालीन जनयुद्ध अथवा लेनिनले प्रयोग गर्नुभएको सहरी विद्रोहबाट मात्रै क्रान्ति सम्पन्न हुँदैन् । त्यस कुरालाई समाजले र विरोधीको नयाँ रणनीतिले पनि पछाडि छोडी सकेको छ । त्यसैले अब क्रान्ति सम्पन्न गर्न यो दुवैबाट माथि उठेको राजनीतिक कार्यदिशा र सैन्य रणनीति चाहिन्छ । त्यसैलाई हामीले एकीकृत जनक्रान्ति भनेका छौँ । क्रान्तिसम्भव छ तर पुरानै तरिकाले होइन, आजको आवश्यकता अनुरूप । क्रान्तिलाई नयाँ उचाइमा उठाउने कुरा महत्वपूर्ण हो ।
तपाईंहरूले एकीकृत जनक्रान्ति भनेको दुई वर्ष भयो तर के गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने अझै पनि मानिसमा अस्पष्टता छ । साँच्चै तपाईंहरू के गर्दै हुनुहुन्छ ?
यसमा अलिक स्पष्टता पनि छ र अस्पष्टता पनि छ । तपाईंले भनेको दुवै कुरा हो । अस्पष्टता यिनीहरूले लड्ने तरिका के हो भनेर होला । यिनले भनेको एकीकृत जनक्रान्ति ०५२ सालकै जस्तो गुराँसको पाखामा पुग्ने खालको हो कि भन्ने पनि मानिसहरूमा होला । अथवा यिनले सहरमै गड्याङगुडुङ गर्न खोजेका हुन् कि भन्ने पनि होला । तर यसका बाबजुद एउटा स्पटता पनि होला । मलाई लाग्छ हामले संसदीय व्यवस्था अस्वीकार गर्छौँ भन्नेमा आजको पुँजीवादी व्यवस्था अस्वीकार गर्छौँ भन्ने कुरामा फेरि स्पष्टता नै होला ।
स्पष्ट छैनन् भन्नेमा पनि दुइटा कुरा छन् । एउटा साँच्चै अन्तत्र्रिmया, छलफलको अभावमा भने अर्काथरी मान्छे भनेको जानाजान थाहा नभएको पार्दैछन् । जब कि त्यो कुरा उनीहरूले बुझेका छन् । प्रचण्ड, बाबुरामलाई त्यो कुरा थाहा छैन भन्नुस त ? माकेका सबैजसो नेतालाई थाहा छ । कम्तिमा न्यूनतम कुरा थाहा छ । हामीसँगै लड्दै भिड्दै सहकार्य गर्दै आएको हुनाले उहाँहरूलाई थाहा छ । तर उहाँहरूले आफ्नो कमजोरीबाट एकछिन भए पनि आराम पाउन उनीहरू स्पष्ट छैनन् भन्नु हुन्छ । त्यो जानाजान गरेको कुरा हो । हामी नेपालको अधुरो क्रान्तिलाई पूर्णता दिन, नेपाली समाजलाई आमूल परिवर्तन गर्न चाहन्छौँ । हामी नेपालको संसदीय व्यवस्था र दलाल पुँजीवादको पूर्ण अन्त्य चाहन्छौँ र त्यसको ठाउँमा वैज्ञानिक समाजवाद स्थापना गर्न चाहन्छौँ । बाँकी अन्य कुरा हामीले स्पष्ट गर्दै जाने हो ।
दुई वर्ष भइसक्दा समेत परिणाममा केही नदेखिएपछि तपाईंहरू कुरा चाहिँ क्रान्तिको गर्ने, काम चाहिँ चन्दा उठाउने मात्र गर्नु हुन्छ भन्ने टिप्पणी छ । यसलाई तपाईंले कसरी हेर्नुभएको छ ?
चन्दा त उठाउन परिहाल्यो । मलाई लाग्छ हामीले जति व्यवस्थित गरेका छौँ, त्यसमा कसैले केही भन्न सक्दैनन् । अर्को कुरा हामीले दुई वर्षमा जे गर्यौँ, मैले नै धेरै भन्ने कुरा भएन । तर राज्य धेरै तरङ्गित छ । कतिखेर के गरौँ भन्ने अन्तरद्वन्द्वमा राज्य छ । हरेक पटक हामीलाई नै मुख्य चुनौतीका रूपमा देखाइन्छ । स्थानीय निकायको निर्वाचनका बेलामा मात्र हाम्रा लगभग ८ सय साथीहरू गिरफ्तार पर्नुभएको छ । दुई जना सहिद हुनुभएको छ । तीनजना साथीहरूलाई गोली लागेको छ । हामीले केही नगरेको भएराज्यले यो किन गरेको त ? पार्टीले जनताको पक्षमा आन्दोलन नछेडेको भए राज्य किन यति धेरै पूर्वाग्रही र आक्रामक हुन्थ्यो ?
यहाँ त राज्य मात्र होइन सबै मान्छे जो भ्रष्टाचारमा संलग्न छन्, उनीहरु हैरान र बेचैन छन् । यसको पक्कै पनि केही कारण त छ । नेपालमा राज्य र अधिकारको दुरूपयोग गरेर भ्रष्टाचार गरी आफ्नो निजी जीवनलाई विलासी बनाउने मान्छेविरुद्ध को लडेको छ ? त्यति मात्र होइन माओवादी आन्दोलनमा देखिएको विचलनको विरुद्धमा को लडेको छ ? समाजमा जनतालाई अन्याय, अत्याचार गर्दा त्यसविरुद्ध को लडेको छ ? यो कुरा कसैबाट छिपेको छैन । परिवर्तनको आशा जनतामा छ । यति धेरै मुद्दा, कुराहरू हाम्रो पार्टीमा जम्मा भएका छन् कि हामीले त्यसलाई एक–एक गरेर हल गरेर जान्छौँ ।
यो निर्वाचनलाई तपाईंहरू बहिष्कार गर्दैहुनुहुन्छ, योबाहेक केही एक्सनसमेत गर्दैहुनुहुन्छ भन्ने हल्ला छ, के यो साँचो हो ?
हो, हामीले निर्वाचनलाई खारेज गरेका छौँ । अघि तपार्इंले सोध्नुभएको र यो कुरा गम्भीर छ । मलाई दुवै छ भन्ने लाग्छ । यदि हाम्रो पार्टीले चन्दा मात्रै उठाउँथ्यो भने यो हल्ला किन भयो होला ? त्यसैले त्यस्तो कुरा होइन । हामीले सीधा र स्पष्टशब्दमा राज्यसँग लड्ने हो भनेका छौँ । यो कुरा हामीले बाहिरै भनेका छौँ र यो कुरा म यहाँ पनि भन्छु । यो राज्यलाई हामी मान्दैनौँ । यो जनविरोधी, प्रगतिविरोधी पुँजीवादी राज्य हो । पुँजीवादी पनि कस्तो भने दलाल पुँजीवादी राज्य । दिमागमा कमिसन खाने र भोगविलास गर्नेबाहेक केही छैन । त्यो कुरा व्यवहारमा सावित हुन्छ नि । त्यसैले हामी यसको विरुद्ध लड्छौँ । लड्दा घटनाक्रम कसरी जान्छ त्यो राज्यसँग सम्बन्धित कुरा हो । म के भन्दिन भने हामी अहिले नै ७५ जिल्ला नियन्त्रण गरिहाल्छौँ भन्दिन । तर के भन्छौँ भने राज्यलाई हामी एउटा उचाइमा सामना गर्छौँं ।
नेपालमा ००७ सालदेखि नै राजनीतिज्ञ राजनीतिक क्रान्ति गर्न सफल र कुशल तर जब राजनीतिक क्रान्ति राज्यमा स्थापित गर्ने सवाल हुन्छ, तब असफल देखिन्छन् अथवा भनौँ न त्यसको वैठानमा असफल देखिन्छन् । कुनै दिन तपाईंहरूले राज्यसत्ता आफ्नो हातमा लिनु भयो भने तपाईंहरू त्यसरी अगाडि बढ्नु हुन्न भन्ने के ग्यारेन्टी छ ?
तपाईंले उठाएको कुरा पूर्ण सत्य होइन । नेपालको मुख्य समस्या आन्दोलन बैठान गर्न नसक्नु नभएर नेताहरूले राजनीतिक आन्दोलनलाई नै पूर्णता दिन नसक्नु हो ।
डेमोक्रेसीको परिभाषा नै काङ्ग्रेससँग छैन् । चुनाव मात्र भन्छन् र चुनावमा पैसा खर्च गर्ने हो भन्छन् । पैसा खर्च गरेर जितेको मान्छे डेमोक्रेसीको माध्यमबाट आएको नेतृत्व हो ? दलालहरू, ठेकेदारहरू, पुँजीपतिहरूले पैसा खर्च गरेको भरमा चुनाव जित्ने कुरा पनि कही डेमोक्रेसी हुन्छ ?काङ्ग्रेस त यति रद्दी थोत्रिएको पार्टी छ, योसँग कुनै सोच नै छैन । विभिन्न विदेशीहरूले उचालेको भरमा चलिरहेको छ ।
आन्दोलनलाई पूर्णता नदिने ?
हो । आन्दोलनलाई पूर्णता नदिनु नै यहाँको मुख्य समस्या हो । काङ्ग्रेसले पूर्णता दिन सकेन । त्यसो त वास्तवमा काङ्ग्रेसले कस्तो व्यवस्था ल्याउन चाहेको हो भन्ने नै म देख्दिन । बीपीको दिमागमा अलिकति अवधारणा भएको म देख्छु । उनले धेरै ठूलो सम्झौता पनि गरेनन् । पछि फर्के त्यो अर्कै कुरा हो । तर एकपटक प्रधानमन्त्रीबाट पक्राउ परेर जेल पर्नेसम्मलाई उनले पचाए । अरू नेताहरूले त्यो पचाउन सकेका छैनन् । म त के देख्छु भने नेपालमा आफैले आफैलाई मलाई मार्छन् भन्ने मान्छेहरू मात्र छन् । त्यति धेरै आफ्नो चिन्ता गर्ने मान्छेले यत्रो बलिदानको बाटोमा हिँडाउने कुरा जटिल कुरा हो । आफ्नो राजनीतिक आदर्शमा समर्पित हुने कुरा महत्वपूर्ण हो नि । मार्छन् मार्दैनन् त्यो भिन्दै कुरा हो । काङ्ग्रेसमा बीपीपछि कुनै पनि नेतृत्वले राजनीतिको खाका दिन सकेका छैनन् । मलाई लाग्छ काङ्ग्रेसमा बौद्धिकहरूको अभाव छ ।
डेमोक्रेसीको परिभाषा नै काङ्ग्रेससँग छैन् । चुनाव मात्र भन्छन् र चुनावमा पैसा खर्च गर्ने हो भन्छन् । पैसा खर्च गरेर जितेको मान्छे डेमोक्रेसीको माध्यमबाट आएको नेतृत्व हो ? दलालहरू, ठेकेदारहरू पुँजीपतिहरूले पैसा खर्च गरेको भरमा चुनाव जित्ने कुरा पनि कही डेमोक्रेसी हुन्छ ? काङ्ग्रेसत यति रद्दी थोत्रिएको पार्टी छ कि योसँग कुनै सोच नै छैन । विभिन्न विदेशीहरूले उचालेको भरमा चलिरहेको छ । यसको सापेक्षमा कम्युनिस्टहरूले एउटा दृष्टिकोण दिए तर तीनले पनि पूर्णता दिन सकेनन् । त्यसो त केपीजी, झलनाथजी, प्रचण्ड–बाबुरामजीले पनि न्यु डेमोक्रेसी र समाजवादको व्याख्या दिन सक्नुहुन्छ । व्याख्यासम्म यिनीहरूसँग एउटा धारणा छ तर यिनले पूर्णता दिन सकेनन् ।
क्रान्तिलाई पूर्णता नदिएकै कारण नेपाली समाज फेरि भूमरीमा परेको छ । अहिले जनता रणभुल्ल छन् । यो ठीक हो भन्दा त्यहीीिठक लाग्ने । होइन त्यो गलत हो भन्दा गलत जस्तै लाग्ने । त्यसैले जनतालाई हामीले प्रशिक्षित गर्नुपर्छ । त्यसैले प्रचण्डजीले यो (राज्यसत्ता) कसरी चलाउन सक्नु हुन्छ ? उहाँले जति फुर्ति लगाए पनि सक्नु हुन्न । उहाँ डुब्ने नै हो । पहिले मलाई कस्तो लाग्थ्यो भने प्रचण्ड भनेको नेपाली समाजको वास्तविक नेतृत्व हो । उहाँसँग छुट्टै नयाँ राज्यको अवधारणा छ । उहाँले नै सबैलाई आफूभित्र विलय गरेर जानु हुन्छ तर आज त उहाँ जनताको बहुदलीय जनवादको झोला भिरेर हिँडेको एमालेको झोलामा माओवाद लगेर हिँड्न थाल्नु भयो । यो त कस्तो भयो भने आफैले खनेको बाटोमा आफै हराए जस्तो भयो ।
तपाईंले वाम गठबन्धनलाई दाम गठबन्धन भन्नुभयो, के यो गठबन्धन ठ्याक्कै वाम होइन ?
कदापि होइन । यसको अलिक गलत व्याख्या गरिएको छ । कम्युनिस्टहरूलाई पछिल्लो समयमा वाम भन्ने चलन आयो । कम्युनिस्टहरूले त वाम सुरु गरेको होइन । वाम पुँजीपतिहरूले सुरु गरेको कुरा हो । त्यतिबेला ब्रिटेनमा यथास्थितिमा रहेको राज्यसत्तासँग लड्ने शक्तिलाई वाम भनिएको हो । नेपालमा कम्युनिस्टलाई वाम भन्ने चलन छ । वाम भनेकोमा आनन्द मान्ने मान्छे पनि छन् । त्यो बेकार कुरा हो । हामी कम्युनिस्ट हो । के–को वाम–साम ? कम्युनिस्ट भनेको पुँजीवादको, संसदीय व्यवस्थाको विरुद्धमा उभिएको विचारधारा हो । नैतिक ढङ्गले त्यति भन्न सक्नु पर्यो नि । अब वाम भएकोमा गर्व गर्ने कम्युनिस्ट भएपछि त्योभन्दा धेरै कम्युनिस्टको बेइज्जत के हुन्छ ? कम्युनिस्ट भनेको वैज्ञानिक समाजवाद, साम्यवादको आदर्शमा हिँड्ने आन्दोलन हो । तर प्रचण्ड र केपी ओलीको जोड केमा छ भने हामी लोकतन्त्रभन्दा यताउता हुँदैनौ । कोई नतर्सनु होला, हामी यो व्यवस्थाभन्दा बाहिर जान खोजेको होइन । गठबन्धन पनि गर्ने अनि तर्क यस्तो गरेर हामीलाई नमार्नु होला, दमन नगर्नु होला भन्ने यस्तो हुतिहारा तालले पनि आन्दोलन हुन्छ ।
तर त्यो ठूलै शक्ति बन्ला जस्तो छ देखिन्छ नि ?
केही बन्दैन, त्यो भ्रम हो । त्यो भनेको बेलुन जस्तो हो । हावा फुस्कन्छ अनि सकिन्छ । हेर्दै जानुस न ।
प्रचण्डजीले यो (राज्यसत्ता) कसरी चलाउन सक्नु हुन्छ ? उहाँले जति फुर्ति लगाए पनि सक्नु हुन्न । उहाँ डुब्ने नै हो । पहिले मलाई कस्तो लाग्थ्यो भने प्रचण्ड भनेको नेपाली समाजको वास्तविक नेतृत्व हो । उहाँसँग छुट्टै नयाँ राज्यको अवधारणा छ । उहाँले नै सबैलाई आफूभित्र विलय गरेर जानुहुन्छ तर आज त उहाँ जनताको बहुदलीय जनवादको झोला भिरेर हिँडेको एमालेको झोलामा माओवाद लगेर हिँड्न थाल्नुभयो ।
तपाईंले संसदीय व्यवस्था बदल्नुभयो भने त होला, नभए त्यो नै शक्तिका रूपमा देखापर्ने हुन्छ होला नि ?
म पूरै विश्वासका साथ के भन्छु भने हामीले यो व्यवस्था बदल्छौँ । हामी यसलाई बदल्ने भनेर नै हिँडेका हौँ । नत्र आफ्नो आदर्शमा किन यति प्रतिबद्ध भएर लाग्ने ? अर्को कुरा उहाँहरू अहिलेकै प्रतिस्पर्धामा टिक्नु हुन्न । त्यो टिक्नका लागि के चाहिन्छ तपाईंलाई थाहा छ ? त्यसको लागि ‘डिटर्मिनेसन’ चाहिन्छ । आफ्नो आदर्शमा हरदम प्रतिबद्ध चाहिन्छ । अन्तिम मूल्य चुकाउन तयार हुनुपर्छ । सक्नु हुन्छ उहाँहरू ? प्रचण्डजी जसमा १७ हजार सहिदहरूको रगत बगेको छ त बचाउन सक्नु भएन । त्यो बचाउनका लागि उहाँले जुन योगदान गर्ने कुरा थियो त्यो गरेको भए जोगिन्थ्यो नि । त्यसो हुन सकेको भए एमाले हामीमै समाहित हुन आउँथ्यो । जनयुद्धबाट फर्केर बहुदलीय जनवादभन्दा पनि तल गिरेर केपीले प्रचण्डलाई थाम्नुपर्ने ठाउँमा पुगेपछि यो मूल्य बचाउन उहाँले सक्नु हुन्छ ? कसैले पनि सक्नुहुन्न । किनभने देशका लागि उहाँहरू मूल्य चुकाउन तयार हुनुहुन्न । मूल्य चुकाउन तयार नभएपछि यो गठबन्धन बच्छ ? धुलोपीठो हुन्छ । हेर्दै जानु होला । मान्छेहरू छिन्न भिन्न हुन्छन् ।
नेपाल पुँजीवादमा प्रवेश गरिसकेको हुनाले अब यो पुँजीवादी व्यवस्थाभित्रबाटै समाजवाद जाने बाटो खोज्नुपर्छ र पुँजी निर्माण गर्नुपर्छ भनिएको छ । यसलाई तपाईंले कसरी हेर्नुभएको छ ?
त्यसलाई पुच्छरवाद भनिन्छ । आफ्नै विचारप्रति हदैसम्मको अविश्वास हो त्यो । लेनिनलाई त्यही भनिन्थ्यो । क्रान्ति जर्मन, फ्रान्स, ब्रिटेनमा गर्न छोडेर उता रुसतिर गर्न पाइन्छ । यो लेनिनको महत्वकाङ्क्षा हो, तानाशाह हुने कुरा हो । यो कुरा एङ्गेल्सका हितैसी कार्ल काउत्सकीको भनाइ हो । तर लेनिनले अन्तरविरोधले जहाँ क्रान्तिको वातावरण बनाउँछ त्यसलाई पक्रने हो भन्नुभयो । पुँजीवादले नै स्वतः सामाजवाद जन्माइदेला र खाउँला भनेर बस्नेहरू किन कम्युनिस्ट हुनु पर्यो । त्यति त अमेरिकन डेमोक्र्याटले पनि भन्छन् । त्यसैले हामीले के भन्नु पर्छ भने नेपलामा पुँजीवाद आएको छैन ।
नेपालमा दलाल पुँजीवाद चाहिँ आएको छ । दलाल पुँजीवादले कहिलै पनि देशलाई समृद्ध गर्न सक्दैन् । उसले राज्यलाई नै टाट पल्टाउने हो । यसको चरित्र भनेकै अलिकति भएको राष्ट्रिय पुँजी, जनशक्तिलाई पनि पलायन गर्ने हो । दलाल पुँजीवाद रहेसम्मन देश स्वाधीन हुन्छ न जनता माथि उठ्छन् । पूरै गोलचक्करमा घुमाएर शोषण गर्ने हो । जसले यसलाई चिर्न सकेका छन् उनीहरू माथि गएका छन् । ६०–७० वर्षअघि चीन कहाँ थियो ? नेपाल जति पनि थिएन । आफ्नो श्रीमती बेचेर बाँच्नुपर्ने अवस्था थियो । अहिले चीन कहाँ पुग्यो ? माओत्सेतुङले निर्माण गरेको समाजवाद नभएको भए त्यहाँ पुग्ने थियो ? आर्थिक वृद्धिदर भारतले समेत बढाएको छ तर भारतको एक तिहाई जनसङ्ख्या हेर्नु त कहाँ छ । चीनको किसान र भारतको किसानलाई हेर्नु त के छ अवस्था ?
यो अन्तर भनेको समाजवादको देन हो । अहिले जेसुकै भए पनि उत्तरकोरियाको कुरा गर्नुस् न । नागरिकहरूमा गर्व हुनुपर्यो हाम्रो देश भनेर । नेपालमा यो व्यवस्थाबाट समाजवाद आउँछ भन्नेहरू दास हुन् । पुँजीवादका दास । त्यो भलै बुद्धिजीवी नै किन नहुन् ती दास मानसिकता भएका बुद्धिजीवी हुन् । यस्तो विचार फैलाउने कुराले के गर्छ भने हामीलाई पुँजीवादको पुच्छर बनाउँछ । यत्रो उत्पीडन गर्ने दलाल पुँजीवाद, यति अमानवीय दलाल पुँजीवाद, यति तानाशाही दलाल पुँजीवाद, यति विकृत र शोषणकारी दलालपुँजीवादभित्र यो तर्क गर्न मिल्छ ? त्यसैले यो भनेको पुच्छरवाद हो ।
जनयुद्धबाट फर्केर बहुदलीय जनवादभन्दा पनि तल गिरेर केपीले प्रचण्डलाई थाम्नुपर्ने ठाउँमा पुगेपछि यो मूल्य बचाउन उहाँले सक्नु हुन्छ ? कसैले पनि सक्नु हुन्न । किनभने देशका लागि उहाँहरू मूल्य चुकाउन तयार हुनुहुन्न । मूल्य चुकाउन तयार नभएपछि यो गठबन्धन बच्छ ? धुलोपीठो हुन्छ । हेर्दै जानु होला । मान्छेहरू छिन्नभिन्न हुन्छन् ।
तपाईंहरूले संसदीय व्यवस्थाको अन्त्य गर्ने, वैज्ञानिक समाजवादमा जाने र कम्युनिस्ट अन्तर्राष्ट्रियवादको कुरा गर्ने तर तपाईंहरूको आन्तरिक राष्ट्रवाद चाहिँ पुरानै खालको देखिने यस्तो किन ?
होइन, हाम्रो त विल्कुलै नयाँ खालको हो । हामीले सर्वहारा वर्गीय राष्ट्रवाद भनेका छौँ । समाजवादी राष्ट्रवाद हो । हामीले त्यति हदसम्म मात्र राष्ट्रवादको कुरा गरेका छौँ । जुन हदसम्म हाम्रो देशमा साम्राज्यवादीहरूको उत्पीडन छ । पहिले जसरी भारतीय विस्तारवाद भन्थ्यौँ त्यो आज साम्राज्यवादमा पुगेको छ । भारतीय साम्राज्यले जुन हदसम्म हाम्रोमा हस्तक्षेप गरेको छ, त्यो चाहे राजनीतिमा होस अथवा अर्थतन्त्रमा त्यो विल्कुलै ‘पोस्ट टे«न्ड’मा गइसकेको छ । त्यसैले हामीले उत्तरसाम्राज्यवाद पनि भनेका छौँ । यस्तो साम्राज्यवादी स्वरूपको अन्तरविरोधलाई परास्त गर्ने तहसम्म हामी राष्ट्रवादी हो ।
तर विश्वव्यापी रूपमा चल्ने मुक्ति आन्दोलनको हिसाबले हामी अन्तर्राष्ट्रयवादी हो । त्यसमा हामीलाई कुनै भ्रम छैन । देशमा जनतामाथि भएको समुदायको उत्पीडनसम्म आन्तरिक राष्ट्रवादी हो । तर त्यो राष्ट्रियताको हल चाहिँ समाजवादले गर्छ । त्यसर्थ हामी नेपालमा पनि हामी अन्तर्राष्ट्रियवादी हो । कुनै जाति विशेष, समूह विशेषमा तानिएर खुम्चिए त्यो अन्धराष्ट्रवाद हो । त्यसले मुक्ति दिँदैन । त्यसले विध्वंश ल्याउँछ । हाम्रो नेपालको मात्र कुरा गर्ने हो भने त्यो अन्धराष्ट्रवाद हो ।
भनेपछि तपाईंहरू राष्ट्रवादको विचार राष्ट्रवाद र अन्तर्राष्ट्रियतावादबीचको ‘डाइलेक्टिक्स’बाट बनेको छ ?
त्यसो हो भने राजावादी शक्तिसँग किन सहकार्य गर्न खोज्नु हुन्छ ?
नेपालमा राजावादी भन्ने नै छैन । हामीले त राष्ट्रवादीसँग भनेका छौँ । तपाईंले भन्नुभएको कुरा कसले उठाइरहेको छ भने जो नेपालमा संसदवादलाई परिवर्तन गरेर जान चाहने राष्ट्रिय शक्ति छ । त्यसको र हाम्रो बीचको अन्तरविरोध बनाई फुटाएर फाइदा लिनका लागि उनीहरूले हत्त न पत्त राष्ट्रवादी, राजावादी भनेको हो ? त्यो न्यूनतम राजनीति नजानेको मान्छेको कुरा भयो । अथवा विषयलाई तोडमोड गरेर भ्रम छर्ने कुरा हो । हामीले भनेको राष्ट्रवादको कुरा राष्ट्रिय शक्तिको कुरा हो । राष्ट्रभित्र जो कम्युनिस्ट छैनन् तर उनीहरू देशलाई माया गर्छन् परिवर्तनलाई माया गर्छन् र कम्युनिस्टसँग सहकार्य गर्छन्, उनीहरूलाई साथ लिने भनेको हो । यस्तो प्रचार गर्नेमा माकेका केही मान्छे छन् । प्रचण्डजी आफै यस्तो प्रचारमा लाग्नु भएको छ । उहाँले हिजो राजाको बारेमा के भन्दै हुनुहुन्थ्यो र हामीले के भनेका छौँ ?
नेपालका धेरैजसो कम्युनिस्टहरू सबैको आजसम्म हेर्दा उनीहरूले दरबार छउन्जेल दरबारलाई राष्ट्रवादी मान्ने ?
अब त दरबार नै छैन । अब त्यो अध्याय नै सकियो । राष्ट्रवादी चाहिँ छन् ।
दरबार निकटका मान्छेलाई राष्ट्रवादी भन्न खोज्नुभएको ?
निकट सिकटको कुरा छोडिदिनुस् । मैले के पनि भनेको छु भने ज्ञानेन्द्र राष्ट्रवादी बनेर, नागरिकको हिसाबमा परिवर्तनलाई स्वीकार गर्छन् र साथ दिन्छन् भने राम्रो कुरा हो । हामीले पहिले नरोद्म सिंहानुकको कुरा पनि राखेका थियौँ । प्रचण्डजी यदि त्यो कूटनीतिमा सफल भएको भए त्यहाँ पुग्नु हुन्थ्यो । देश त्यहाँ पुग्ने थियो । उहाँले दर्जन पटक भनिसक्नु भएको छ, हामीले वीरेन्द्रसँग सहकार्य गर्न खोजेका थियौँ भन्ने । अब त झन दरबार नै छैन भने केको राजावादीको कुरा गर्नु पर्यो । जतिबेला थियो त्यतिबेलाको कुरालाई छोडेर नभएको कुरामा हाम्रो बारे भ्रम छर्ने के जरुरत छ ? हामीले लुकाई छिपाई होइन स्पष्ट भनेका छौँ । यदि नेपालका कुनै पनि नागरिक उनीहरू हाम्रो देशलाई रक्षा गर्न, परिवर्तनको आन्दोलनमा सहभागी हुन चाहन्छन् भने ओके । हामी खुला छौँ ।
सबैलाई निषेध गरेर अगाडि बढ्ने त हामीले भनेको होइन । तर उनीहरूले हाम्रो मान्यता, विचारलाई स्वीकार चाहिँ गर्नुपर्छ । अर्काको कुरा किन प्रचण्डजी, बाबुरामजी अथवा केपीजी आउनुस् सँगै जाऊँ । अब त झन् कस्तोसम्म भयो भने ज्ञानेन्द्रले समेत राष्ट्रघात भयो, देश जोखिममा पर्यो भन्नुपर्ने अवस्था आयो । तर नेताहरू चाहिँ ठीक छ, चुनावमा भाग लिनु लोकतन्त्र हो भनेर लाज लाग्ने कुरा गर्दा हामीले जबाफ दिनुपर्छ जस्तो लाग्दैन ।
हामीले निकट भविष्यमै नेपालमा उथलपुथल हुने देखेका छौँ । हामी त्यो ल्याउँछौँ । जनताले साथ दिनुपर्छ ।
तपाईंको एकीकृत जनक्रान्तिको मोडेलभित्र नेपालका उत्पीडित समुदायहरू मधेसी, जनजाति, दलित, महिलाहरू सबैको मुद्दालाई जुन यो संविधानले पनि ठीकसँग सम्बोधन गरिसकेको छैन्, त्यसलाई सम्बोधन गर्ने तपाईंसँग के योजना छ ?
हाम्रा सातवटा बुँदाहरू छन् । पहिलो, नेपालमा क्रान्ति गर्दा गाउँबाट अथवा सहरबाट कहाँबाट लड्ने, गाउँका किसानका लागि कि सहरका मजदुरका लागि क्रान्ति गर्ने ? भन्ने जस्ता कुरा हामीले गर्नु हुँदैन । यदि नेपालमा क्रान्ति गर्ने हो भने दलाल पुँजीवादी सत्तासँग उत्पीडनमा परेका सबै नेपाली जनतालाई एक ढिक्का बनाएर सत्ताका विरुद्धमा लड्नुपर्छ । त्यसैले पहिले नै जनतालाई विभाजित गरिदिनु हुन्न । नेपालको हकमा आज सहरको जनता पनि त्यति नै उत्पीडित छन् जति गाउँको जनता ।
दुई, किसान र मजदुर भनेर मात्र अहिले क्रान्ति हुँदैन । नेपालमा क्रान्ति गर्ने हो भने जसलाई हामीले नयाँ श्रमिक वर्ग भनेका छौँ, त्यसलाई साथ लिनुपर्छ । त्यो भनेको विद्यालय र विश्वविद्यालयमा पढिरहेका र पढाइ सकिसकेका लाखौँ युवाहरू हुन् । तिनीहरू पनि श्रमिक जनताकै छोराछोरी हुन् । तीनलाई नसमेटेसम्म क्रान्ति हुँदैन । सबै बुद्धिजीवीलाई अहिले के नठान्नु भने उनीहरू बुर्जुवा हुन् । आजको मजदुर, किसान भनेको हिजोको जस्तो तानमा र खेतमा काम गर्ने मात्र छैनन् । आज कलेज पढेको पनि मजदुर र किसान हुन् । शिक्षा जनताको हातमा पुगेसँगै श्रमिक वर्गमा आएको परिवर्तनलाई हामीले समात्नु पर्छ ।
तेस्रो, नेपाल जस्तो देशमा चारवटा समुदाय छ । मुख्य रूपले उनीहरूसम्म पूर्ण अधिकार पुगेको छैन । जसमा– बाहुन, क्षेत्री, जनजाति, मधेसी र दलित पर्छन् । यो चारवटा समुदाय भनेको नेपालको आधाभूत समुदाय हो । यो चारवटै समुदायलाई क्रान्ति हाम्रो हो भन्ने नबनाएसम्म क्रान्ति हुँदैन । त्यसैले यो परिवर्तनमा सबै आउनुपर्छ ।
चौथो, विज्ञान र प्रविधिको जमानामा विद्रोह गर्दा सबै प्रविधिको ठीक–ठीक समायोजन गर्दै क्रान्तिमा सहयोगी बनाउनुपर्छ । पाँचौँ, नेपाल जस्तो देशमा क्रान्ति गर्दा जनताको भावनालाई ठीक ढङ्गले समेटनु पर्यो । दलाल पुँजीवादी अर्थतन्त्रको समयमा राष्ट्रिय पुँजीपति वर्गलाई पनि सँगै लिएर क्रान्तिमा जानुपर्छ । अनि हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध राम्रो हुनुपर्छ । यी कुरा भनेको नेपाली क्रान्तिका आधारभूत सर्त हुन् । त्यसका लागि नै क्रान्ति चाहिने हो ।
भन्नुको अर्थ तपाईंको बाटो लामै छ ?
होइन, यो छोटो पनि छ, लामो पनि छ । दुवै छ भन्नुस् न । जनताले यो कुरा बुझनु पर्यो । लड्ने कुरा त भैहाल्यो । लामै लड्ने हो । माक्र्स आजीवन लड्नु भयो । तर राजनीतिक आन्दोलनका हिसाबले यो लामो होइन । हामीले निकट भविष्यमै नेपालमा उथलपुथल हुने देखेका छौँ । हामी त्यो ल्याउँछौँ । जनताले साथ दिनुपर्छ । मैले त जनतालाई भनेको पनि छु, तपाईंहरूले यो व्यवस्था पनि मन नपराउने र नयाँ गर्छु भन्नेलाई साथ पनि नदिने हुँदैन । तपाईंहरूले साथ दिनुभएन भने यो विसर्जनतिर जान्छ । हामीले त्यो सम्भव देखेका छौँ ।
Jan. 29, 2019, 1:51 p.m. Barsha Man chand
तिम्रो झुसे चन्दा क्रान्ती गर्नु भन्दा पहिले इन्डियनहरुले दस वर्ष शेल्टर दिएर मावोवादिलाई किन पालिए र आफु पनि किन पालिएर सिनो खाएर बसिस भन्ने पहिला जवाफ देउ मुला ५२ देखी ६२ अझ ६८ सम्म सत्ता सम्म लुट्पुटिने दास विप्लवे ?
‘नेपालीलाई खास वर्गको भाषा बनाउन खोजिएकाले वितण्डा मच्चिएको हो’
हामीले दल र तिनका नेतालाई चाहिनेभन्दा बढी शक्तिशाली बनायौंः पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेल
‘जुन दिन एकीकरणको घोषणा हुन्छ त्यसको भोलिपल्ट हामी सरकार छाड्छौँ’
'प्रदेश सरकारले चारआना पैसा पनि फजुल खर्च गरेको छैन'